Kwethulwe iGatsha le-Factory Gaoyi elisha!
ngu admin ngo 20-04-28
1. Okomshini wedwala osanda kuthengwa, ngenxa yezindlela zokuvikela zokupakisha, kuzoba no-grease wokulwa nokugqwala ngaphakathi. Qinisekisa ukuyiqaqa futhi uyisuse ngaphambi kokuyisebenzisa, bese uthambisa izithambiso kuzo zonke izingxenye ezinyakazayo lapho ulayisha kabusha. Ngaphambi kokuba umsebenzi uvulwe ...
Ifektri yethu entsha etholakala eGao yi Hi tech zone, izikhathi ezi-3 zikhulu kunemboni yakudala, imigqa engu-2 eyengeziwe yokukhiqiza kunefektri endala, ngemishini emisha sha nempahla yokusebenza singanelisa izidingo zamakhasimende amaningi. Ukhetho luhlobo lwethuluzi le-pneumatic elisetshenziswa kabanzi ezimayini ...
IDrum lidlalelwa minyaka yonke ngosuku oluvulekileyo lwefekthri ngemuva kwamaholide omkhosi wasentwasahlobo futhi osuvele waba ngumhlangano eQihong, kukhombisa ukusebenza kahle kweqembu phakathi kwamalungu e-qihong. Lo msebenzi wasungulwa lapho kuqala ifektri, ngaleso sikhathi sikudoti ...